Amaphupho ngezilwane ezifuyiwe nemfuyo – iAfrika
Zihlukene izinto ezichazwa ukuphupha inkomazi, incazelo itholakala ngokuthi inkomazi ibiyenzani ephusheni. Uma uphuphe ikujaha lokho kuyibika lokubakhona kwesitha. Uma ikuficile futhi yakulimaza, lokho kuchaza ukuthi sizogcina sikunqobile isitha sakho. Kanti uma iphupho liphetha ngokuthi ingakufici lokho kuhle, kusho ukuthi uyosinqoba isitha sakho. Uma uphuphe uyisenga lokho kuhle, kuyisibonakaliso senzalo ozoyithola ekuhambeni kwesikhathi. Uma ungumuntu wesifazane … Read more
Uma uphupha ubona imvu kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwehleka kuwe. Eyodwa nje imvu isho ukuthi uzochuma emsebenzini ikakhulukazi uma imnyama. Iqulu lezimvu lisho ukuthi uzophumelela futhi ube nomshado ojabule nonobuqotho). Amaphupho ngenqama.
Uma uphupha ubona inqama kusho ukuthi uzoba neshwa ekusaseni lakho. Amaphupho ngemvu.
Uma uphupha ubona inkabi futhi ihlanzekile futhi imhlophe kusho ukuthi uyokwaziwa ngezinjongo zakho ezimsulwa kanye nenhliziyo enhle.
Uma uphupha ubona izimvu ezisencane incazelo iya ngokuthi uziphatha kanjani. Uma uzifuya futhi uzinakekela kusho ukuchuma nempumelelo kuwe. Uma uzihlaba noma uzidla kusho ukuthi uzovuma ngokubi okwenzile bese ujeza.
Uma uphupha ubona amadada uzochuma futhi uphumelele ingqobo nje uma ungawabulalanga. Kulesosimo kusho ishwa nenkinga.
Uma uphupha ubona imbongolo kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma uyigibele imbongolo kuzoba nenkinga ekusaseni lakho futhi abantu obubathemba bazokuhlubuka. Uma imbongolo ikulandela uyokhathazwa umona nenkohliso kodwa konke kuyodlula. Uma ubona imbongolo kodwa ungathintani nayo kusho ukuthi uzophumelela naphezu kwezinkinga. Amaphupho ngamahhashi.